Qatar oo faragelin ku haysa doorashadda Soomaaliya | Keydmedia
Qatar oo faragelin ku haysa doorashadda Soomaaliya
Tan iyo 2018, dowladda Qatar ayaa kordhisay faragelinteeda arrimaha Soomaaliya, kadib markii Imaaraadka iyo dowladda Federaalka isku dhaceen, kadibna dalka isaga baxay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Safiirka Qatar ee Soomaaliya, Xasan Bin Xamsa ayaa maanta oo Talaado ah kulan gaar ah la qaatey gudoomiyaha Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya xili Doha lagu eedeynayo inay faragelin ku hayso arrimaha gudah dalka.
Kulanka oo ka dhacay Xafiiska Mursal ayaa looga hadlay Arrimo ay kamid yihiin Doorashooyinka muranka ka taagan ee dib loo dhigay si mudo 11 bilood oo mudo kordhin ah loogu sameeyo maamulka uu hogaamiyo Farmaajo, oo 5 bilood u hartay.
Kulanka Mursal iyo Safiirka ayaa kusoo beegmaya iyadoo Ra'iisul Wasaare Khayre maalin kahor kasoo laabtay Qatar, oo wadahadallo sida Keydmedia Online xogta ku helayso sheegaya inay ku saabsanaayeen is-casilaadiisa, maadaama la doonayo in xilkiisa lagu qanciyo mucaaradka diidan mudo korarsiga DF.
Danjire Xasan Bin Xamsa waxuu dhawaan booqday Kismaayo, oo Axmed Madoobe kula soo kulmay, waxaana socdaalkiisa uu qeyb ka yahay dhaq-dhaqaaqa dowladda uu wakiilka u yahay, oo raadinaysa in Farmaajo xukunka sii hayo, sidoo kalena doorashada soo socoto markale soo saaraan Madaxweyne ku daacad u ah dowladda Qatar.
Fahad Yaasiin, oo ah taliyaha NISA oo galaan-galan iyo awood badan ku leh DF, ayaa Qatar u fududeeya danaheeda ay ka leedahay wadanka Soomaaliya.
Qatar waxaa xiriirka u jaray dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain oo kawada tirsanaayeen Iskaashiga Khaliijka Carabta [GCC] kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagaxisada caalamka, oo Al-Shabaab ay kamid tahay.